Tsy vitako daholo! | Martech Zone
Tsy vitako daholo!
Zoma, Desambra 9, 2011 Zoma, Desambra 9, 2011 Tempolin'i Lavon
Rehefa tonga eo amin'ny manodidina ny fialantsasatra dia maheno olona marobe miteny ianao hoe ahoana no azon'izy ireo ampiasaina mandritra ny ora maromaro amin'ny iray andro. Na raha afaka manao klone ny tenany dia afaka amin'ny toerana roa indray mandeha izy ireo ary hahazo fahombiazana bebe kokoa. Toa izany koa no mety ho lazain'ny mpivarotra sy ny fahatsapany ny programa mailaka ataon'izy ireo. Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy manana ny rendrarenan'ny ekipa mpivarotra mailaka iray manontolo ary voatery miantehitra amin'ny olona iray na olona roa hitantana ny programa manontolo.
Azoko izany, koa avelao aho hanolotra hevitra roa izay mety hanampy anao hahatsapa ho toy ny manana ekipa mpivarotra iray manontolo mitantana ny programa fa tsy ny tenanao fotsiny. Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy manana ny rendrarenan'ny ekipa mpivarotra mailaka iray manontolo ary voatery miantehitra amin'ny olona iray na olona roa hitantana ny programa manontolo.
Fametrahana alimanaka fandefasana mailaka dia fomba tsara hijanonana ho voalamina, nefa koa manampy anao handamina mialoha. Fantaro hoe impiry ianao no te handefa ny mpihaino anao ary manamarika izany amin'ny kalandrie. Azonao atao ihany koa ny manakatra hatramin'ny farany ny famaritana izay hafatra kasainao halefa ihany koa.
Template sy tranomboky atiny avelao ianao handray ny vaovao napetrakao sy nalaminao tao amin'ny kalandrie votoatinao ary hanomboka hamorona azy. Mamorona modely maromaro amin'ny fotoana malalaka anananao rehefa manana mailaka hivoaka ianao amin'ny ho avy ary potika mandritra ny fotoana.
Autoresponders azo apetraka hamaly ho azy ny hetsika sasany. Ohatra, raha misy misoratra anarana amin'ny lisitry ny mailakao, azonao atao ny manamboatra mailaka mandeha ho azy handefasana azy ireo ary hanome azy ireo antso hafa hihetsika.
Azonao atao ny mampiasa ireo fitaovana ireo hanatsarana ny ezaka amin'ny varotra mailakao sy hanomezanao fandaharana mailaka betsaka kokoa ho an'ny mpihaino anao, saingy raha tsy mahatsiaro ho tsy vitanao izany rehetra izany. Fa kosa, ho tsapanao fa manana ekipa iray manohana anao amin'ny cranking ireo mailaka mahafinaritra ianao!
Tags: autoresponderstranomboky atinyalimanaka fandefasana mailaka
Dec 9, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Lahatsoratra tsara, @lavon_temple: twitter! Ity herinandro ity dia iray tamin'ireo herinandro izay nanadinoako ara-bakiteny ny andro omaly. Toa miharatsy tokoa izany rehefa manakaiky ny faran'ny taona isika - samy manandrana manamafy ny firosoany amin'ny faran'ny taona ny orinasa ary miasa amin'ny Janoary. Wow… tototra izahay.
Tiako ny hevitra momba ny kalandrie fandefasa-mailaka. Na dia manao an'izany amin'ny fomba lo-tech faramparany aza ianao (kalandrie lehibe amin'ny rindrina), dia afaka manampy amin'ny fanadiovana ny takelakao izany ary hampiakatra ny sainao amin'ny zavatra hafa.